Otu esi etinye XanMod Linux Kernel na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye XanMod Linux Kernel na Ubuntu 20.04
November 16, 2021 by Jọshụa James
XanMod bụ Linux Kernel n'efu, nke mepere emepe maka kernel ngwaahịa nwere Ubuntu 20.04 LTS. Ọ nwere ntọala omenala yana atụmatụ ọhụrụ wee wuo ya iji nye ahụmịhe desktọpụ na-anabata ma dịkwa mma, ọkachasị maka ngwaike ọhụrụ. XanMod bụ ama ama n'etiti Linux Gaming, nkwanye, na ultra-latency chọrọ ma na-anya isi Linux Kernels ọhụrụ, na-enwe ọtụtụ alaka ịhọrọ site na kwụsiri ike, nsọtụ, na mmepe.
Maka ndị ọrụ na-achọ ka ha nweta kernel sistemụ ha na-achọghị iji aka tinye kernels ma ọ bụ jiri ebe nchekwa nnwale/anaghị akwụsi ike, ịwụnye kernel ndị ọzọ nwere ike ịbụ maka gị.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi ebubata ebe nchekwa XanMod wee wụnye Linux Kernel ọhụrụ na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa gị.
Ọrụ mbụ bụ ibubata ebe nchekwa XanMod. Enwere ike ime nke a ọtụtụ ụzọ, mana nkuzi a ga-eji ọdụ njikwa ngwugwu dabara adaba iji mee ka ihe dị mfe.
Ka ịlele ma ọ bụ tinyegharịa Ubuntu 20.04 LTS HWE Kernel:
Ka ịlele ma ọ bụ tinyegharịa Ubuntu 20.04 LTS Generic Kernel:
Site na ndabara, ekwesịrị itinye kernel ndabara Ubuntu 20.04.
Dị ka mmepụta nke dị n'elu gosipụtara, ị laghachiri na kernel Linux ndabara nke Ubuntu 20.04 bịara, si otú a wepụ XanMod na sistemụ gị nke ọma.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye XanMod na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Emebere XanMod maka ndị ọrụ desktọpụ nwere ngwaike kachasị ọhụrụ, mana enwere ike itinye nke a na desktọpụ Ubuntu ọ bụla ma ọ bụ nkesa. Agbanyeghị, a na-adụ ọdụ ka ịme nyocha tupu ịkwalite ya, ọ dịghịkwa aro ka iji ya na sistemụ dị oke egwu ma ọ bụ ụdị mmepụta.
Categories Ubuntu Tags Linux kernel, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, XanMod Mail igodo
Otu esi etinye Spotify na Ubuntu 20.04